कलाकारको दशैं: कसले कसरी मनाउँदैछन् ! « Sajilokhabar
कलाकारको दशैं: कसले कसरी मनाउँदैछन् !
काठमाडौँ, १७ असोज । वर्षभरी एक्सन कटमा रमाउने कलाकार हुन् वा संगीतिक कार्यक्रमकले व्यस्त गायक गायिका । दसैँको रौनकले सबैलाई छोइसकेको छ । दसैँको किनमेलदेखि गाउँको यात्रासम्मको हतारो सबैमा देख्न सकिन्छ ।
यो दसैँ कोही आफ्नो पुरानो घरमा पुग्दैछन् । केही फूर्सद निकालेर आफन्तसँग मनाउने तरखरमा छन् । कसैकसैको कसरत दसैँमा घुमघाम गर्नेछ । कतिपयले त दसैँंको लागि विशेष योजना समेत बनाएका छन् । कोहीका भने हल्काफुल्कामै दसैँ बिदा गर्ने मूड छ । कलाकारको यो वर्षको दसैँं योजना उनीहरुकै शब्दमाः
पत्रकारले लेखेपछि मात्र फिल्मको कमाइ हामीले थाहा पाउछौः निश्चिल
काठमाडौं, २७ असोज । अभिनेता निश्चिल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खडकाले अभिनय गरेको फिल्म ‘घामड
छमछमीको टाइटल बन्न अडियन्सको दिल जित्दै दिलमायाँ
झापा, २७ असोज । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित रियो छमछमी ४ मा एक नम्बर प्रदेशकै प्रतिनिधित्व
सलमानको घर अगाडि ‘बीग बोस’को विरोधमा प्रदर्शन
एजेन्सी, २६ असोज । अहिले भारतीय टेलिभिजनको चर्चित रियालिटी शो ‘बीग बोस’को १३ औं श्रृङ्खला
काठमाडौँ, २३ असोज । यस साताको शुक्रबार अर्थात् असोज २४ गते चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’